်ဒေါက်တာအောင်ဆန်းစုကြည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing »်ဒေါက်တာအောင်ဆန်းစုကြည်
ဂုဏ်ယူပါတယ်အမေ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင်အမေက အခုအခါမှာတော့ ကမ္ဘာ့အလည်မှာ မြန်မာတို့ရဲ့ ဂုဏ်ကိုထပ်ဆောင်လိုက်ပြန်ပြီ။ Honorary Doctor of Civil Law Dr. Aung San Suu Kyi ဆိုတဲ့ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးကြီးကို အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော် Oxford University ကြီးရဲ့ ချီးမြှင့်ခြင်းကို ခန်းခန်းနားသိုက်မြိုက်စွာလက်ခံရရှိခဲ့ပါပြီ။ အမေ့ရဲ့ကျေးဇူးတင်စကားပြောအပြီးမှာတော့ နိုဘယ်ဆုပေးပွဲတုန်းကလိုပဲ လက်ခုတ်သံတွေကို တော်တော်နဲ့မစဲနိုင် ဘူးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘွဲ့လက်ခံယူအပြီးမှာလဲ ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံတဲ့အခါမှာလဲ မပြီးနိုင်မစီးနိုင်ပုံပေါင်းများစွာကို ဟိုဘက်လှည့်ပါအုံး၊ ဒီဘက်တိုးပါအုံးနဲ့ရိုက်နေကြတဲ့မြင် ကွင်းကမျက်ရည်တောင်ဝဲခဲ့ရပါတယ်။ ထပ်ဆင့်ဂုဏ်ယူပါတယ်အမေ။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ရှေ့ ရေးအတွက် အကောင်းဆုံးလမ်းပြဦးဆောင်မည့်သူ အမေစု အတွက် ဂုဏ်ယူပါသည်။
အမေ..ရေ. ကျွန်တော်တို့ ..ချစ်သော အမေ….ဂုဏ်ယူစရာ.မြန်မာ အမျိုးသမီး..အမေစု…
သတင်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ..။
ဒေါ်စုအတွက်…၀မ်းသာပီတိများနဲ့အတူ၊ ပြောမပြတတ်အောင် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
အနှိုင်းမဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ဒေါက်တာ အောင်ဆန်းစုကြည်ကို
တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေရဲ့ ဘဝကို စာနာစွာ ရင်ဖွင့်ပေးတဲ့ အတွက်
အခြေမခိုင်တဲ့ ပညာရေး ကို အနာဂတ်မဲ့စွာ သင်ကြားရတဲ့
ကျောင်းသားတွေရဲ့ ဘဝကို ရင်ထဲဆို့ နင့်အောင် ခံစားရမိပါတယ်။
ကျောင်းသားတွေကို မြိုင်ရပ်နှင်ပြီး အကျဉ်းတက္ကသိုလ်မှာ ဘဝသေအောင် သတ်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာကျောင်းသားလူငယ်တွေ အစုလိုက်အပုံလိုက် ဘဝစတေးခံနေရပါတယ်။
မင်းက ဘောလုံးပွဲတွေ နဲ့ ယူကရိန်း နဲ့ ပိုလန် ကို ရောက်နေတာကိုး.။
မနေ့ ကထဲ က မင်းတို့ ကြီးမေ ယူကေ ကို ရောက်နေတာ။ :-)
အမေစု အိုင်ယာလန်ရောက်တော့ အိုင်ယာလန်အသင်းသားတွေက အမေစုကိုတွေ့ချင်လို့ ယူရိုပွဲကနေ အမြန်အိမ်ပြန်ကြတယ်လေ…
အခု အမေစုက အင်္ဂလန်ရောက်နေပြန်ပြီလေ…
ဂျာမနီနဲ့ စပိန်ကို သွားလည်ပါစေတော်…
ဒီဘွဲ့ က သူ့ကို ပေးပြီးသားလို့ ခေါ်လို့ရပါတယ်။
ဒီတော့ ဒေါက်တာ လို့ တပ်ချင်ရင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉နှစ် ကထဲ က တပ်လို့ ရပြီးသားပါ သဲလေး ရေ့ ;-)
(မူရင်း – မောင်ပေ)
မတပ်ချင်လို့ ကို မတပ်တာပါ။
သူ့ကို ဒီလို မြင်ရလေ ဒီလို လူတစ်ယောက်ဟာ မြန်မာ မှာတင်မက ကမ္ဘာမှာပါ ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဖြစ်မှာ ဆိုတဲ့ အတွေးရတယ်။
မဖြစ်နိုင်ခဲ့တာကို ပြန် လှည့်ပြီး မတမ်းတ သင့်ပေမဲ့ ကုန်ခဲ့တဲ့ အချိန် တွေ ကို နှမြောလိုက်တာ။
အနှစ် နှစ်ဆယ် ကျော် ဆိုတာ မြန်မာပြည်လို အခြေခံ ရှိပြီး တိုင်းပြည် အတွက် အရှိန်ကောင်းကောင်း နဲ့ ထိုးတက်သွားနိုင်တာ။
အခုတော့ နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့် ဖို့ ကိုဘဲ ဝိုင်းပြီး သတိရှိကြရမှာဘဲ။
ပိုက်ပိုက်နဲ့ ၀ယ်ထားတဲ့ ဟိုလူကြီးတွေ ကြည့်ထား ။။ဒါမှ အမှန်အကန် ဆိုတာ..
ဒေါက်တာ တပ်ခွင့်ရတာတောင် မတပ်ဘဲနေတာ ..
တကယ်ကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် နဲ့ရခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာဘွဲ့ကြီးပါတော် ။ အမေစု အတွက် ရော မြန်မာ နိုင်ငံအတွက်ပါ ဂုဏ်ယူစရာကြီး ။ အမေစုကြောင့် မြန်မာကို ကမ္ဘာက သိပြီး လေးစားရတယ် ။ ( ဟိုလူကြီး ကတော့ရှက်စရာကြီး)
ဟဲ့ဟဲ့ ဘယ်လူဂျီးလဲဟဲ့ ရှင်းအောင်ပြောစမ်းပါအေ
ဒို့မေမေစုအတွက် အရမ်းကို ဝမ်းသာပီတိ ဂွမ်းဆီထိရပါတယ်ဗျားးးးး
ညီးကလဲ အေ ဟိုလူကြီးပါဆို (လယ်သမားတွေဆီက မြေတွေကို မလိမ့်တပတ်သိမ်းပြီး စက်မှူဇုံလုပ်ထားတာတယ်) ။
ဒေါက်တာ ဘွဲ့ကြီး နှင့် နိုဗယ်ဆု ကတော့ မြန်မာကို ကမ္ဘာက သေချာ သိမြင်လာပြီလို့ ထင်တယ်။
မြန်မာဝတ်စုံရဲ့ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားမှုကိုလည်း အခမ်းအနားတိုင်းမှာ ပြသခဲ့တဲ့ အတွက် မြန်မာမလေးတွေရဲ့ မြန်မာဝတ်စုံကို နောက်ဆို စိတ်ဝင်စားမှု ပိုရှိလာလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အခု ငယ်ရွယ်တဲ့ မြန်မာမတွေကတော့ ကိုရီးယားဝတ်စုံနောက်ကို လိုက်နေကြတယ်။
ကမ္ဘာမှာ မြန်မာလူမျိုး တွေရဲ့ ဂုဏ်ယူစရာ ကိစ္စတွေကို အများကြီး ဖန်တီးပေးတဲ့ ဒေါက်တာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား လေးစားပါတယ် ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ဒီလို ဆုကြီးတွေ ရတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေလည်း ထပ်ပြီးတော့ နောက်ထပ် နောက်ထပ် ရှိလာပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒေါ်စု သွားတဲ့ လမ်းတလျှောက် အရမ်းကိုကြိုဆိုကြတာ သတင်းတွေမှာ တွေ့တယ်။ တကယ်ကို ၀မ်းသာ ပီတိ ဖြစ်ဖို့လည်း ကောင်းတယ်။
တချို့သော ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်ဆု ယူတဲ့ သူတွေ သွားယူတဲ့ အချိန်အခါမှာ ဆန္ဒပြတာတို့ စိတ်အနှောက်အယှက်ပေးတာတို့ ရှိတာတွေ တွေ့ဖူးတယ်။ အရမ်းကို အေးချမ်းစွာနဲ့ အများပြည်သူ ချစ်ခင်ခြင်း ခံရတဲ့ အတွက် မြန်မာ လူမျိုး များ အနေနဲ့လည်း အရမ်းကို ဂုဏ်တက်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒေါ်စု ရဲ့ မိန့်ခွန်းတိုင်းမှာ သတိထားမိတာ တခုတော့ ရှိတယ်။ မိန်းခွန်းပြောတဲ့ လူ တယောက် အနေနဲ့ အတည်အတံ့ ပြောရင်းနဲ့ နားထောင်တဲ့ လူကို ဆွဲဆောင်မှု ဖြစ်စေတဲ့ ပြုံးရည်စေတဲ့ စကားလေးတွေ ညှပ်ပြီး ပြောတာလေးတွေ တွေ့မိတယ်။ မြန်မာလိုပြောတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အင်္ဂလိပ်လို ပြောတဲ့ အခါမှ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဟာသဥာဏ်လည်း ထက်တယ် ထင်တယ်။
အားလုံး အာရုံစိုက်ပြီး ငြိမ်နားထောင်နေရာကနေပြီးတော့ ရုတ်တရက် အားလုံးကို ထ ရယ်အောင် လုပ်နိုင်တယ်။
အခြားသော မိန့်ခွန်းပြောတဲ့ သူတွေနဲ့ မတူတဲ့ အမူအရာလေးတွေမို့ သတိထားမိတာလေးပါ။
ဘယ့်နှယ် ဘယ့်နှယ် ………..
တို့အမေကို ဟိုလူကြီးတွေနဲ့ နှိုင်းစရာလားးးးးးးးးးး
အစ်မသဲနုအေးရေ .. မြင်ရတာ အရမ်းကို ကျက်သရေ ရှိတဲ့ ပုံတွေပါပဲ … ။
ညီမလည်း ဒီနေ့မနက်ဖေ့စ်ဘွခ်ထဲဝင်ကြည့်ရင်း ….. ကြက်သီးမွှေးညှင်းထတဲ့ အထိ … ဂုဏ်ယူဝမ်းသာမိပါတယ် ။ ကမ္ဘာမှာတောင် လူတော်စာရင်းဝင်တဲ့ အမေစုရဲ့ ကျော်ကြားမှုကတော့ …. တကယ့်ကို အံ့မခန်းပါပဲ …. ။ ပြန်တင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ အစ်မရေ ။
အန်တီရဲ့ အရည်အချင်းတွေလေ ပတ္တမြားမှန်ရင်နွံမနစ်ပါဘူး။
ပတ္တမြားဂူကို အရောင်မှိန်အောင်ဝက်တွေ ရွှံနဲ့သုတ်လေ ပိုတောက်လေပဲ။